Faka: Izici Zokubandakanywa Kokusebenza Kweselula Okungenakhodi | Martech Zone
Faka: Izici Zokuzibandakanya Zeselula Ezingenakhodi
NgoLwesine, Septhemba 22, 2016 NgoLwesithathu, Septemba 28, 2016 Douglas Karr
Faka yenzelwe imikhankaso yohlelo lokusebenza lweselula engenziwa ngabakhangisi ngaphandle kwesidingo sokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lweselula. Ipulatifomu inezinhlobo eziningi zezici zokuzibandakanya ezingafakwa kalula, zibuyekezwe futhi ziphathwe. Izici eziningi zenzelwe abathengisi namaqembu womkhiqizo ukwenza uhambo lomsebenzisi lube ngolwakho, luqalise noma kunini, lukhulise ukuzibandakanya, futhi lilinganise futhi luhlaziye ukusebenza kohlelo lokusebenza. Izinhlelo zokusebenza zidabuka ku-iOS naku-Android.
Izici zihlukaniswe zaba yizindawo eziyisishiyagalombili ezisebenzayo, kufaka phakathi i-Guide, Khulumisanani, Cwenga, Guqula, Zibandakanye, Zuze, Qondisisa futhi Usungule. Okulandelayo yizincazelo zesici ezivela ku- Faka Umhlahlandlela Womkhiqizo.
Guide ukufakwa kukusiza ukuthi ungene ngempumelelo kubasebenzisi abasha futhi kuveze asebekhona kuzici ezengeziwe namakhono.
Ukuhamba kohlelo lokusebenza - Lungiselela isipiliyoni sohlelo lokusebenza sokuqala sabasebenzisi bakho. Qiniseka ukuthi bayaliqonda inani lohlelo lokusebenza ngokubonisa izici eziyinhloko zohlelo lokusebenza besebenzisa i-carousel ebonakala lapho umsebenzisi eqala ukuvula uhlelo lokusebenza.
Gqamisa Indawo Yohlelo Lokusebenza - Ukuqondisa kwabasebenzisi endaweni ethile yohlelo lokusebenza "ngokugqamisa" le ndawo ngombhalo ochazayo. Ilungele ukugibela ngaphakathi, noma ukushayela ukusetshenziswa kwezici ezintsha.
Ingxoxo yamathuluzi weselula - Nikeza ngethiphu yamathuluzi eselula echaza inkinobho noma isici, ngombhalo okhomba kulolo hlelo lokusebenza oluthile, isici noma ukubizelwa esenzweni.
Phakamisa Isici Sohlelo Lokusebenza - Kumongo ofanele, phakamisa kubasebenzisi ukuthi basebenzise isici esithile sohlelo lokusebenza bese beyisa ngqo kusikrini sohlelo lokusebenza olufanele, besebenzisa isixhumanisi esijulile.
Communications okufakwayo kudala izingxoxo ezihlosiwe nabasebenzisi ngokuthumela umlayezo ngesikhathi esifanele, okubangelwe ukusetshenziswa okuthile kohlelo lokusebenza, ngumlando womsebenzisi noma umsebenzi wohlelo lokusebenza lwesikhathi sangempela nokuningi, futhi kungakhonjwa ukwandisa ukuzibandakanya komsebenzisi nomlayezo.
Umlayezo ongaphakathi nohlelo - Imilayezo engaphakathi nohlelo yazisa umsebenzisi, futhi ingahambisana nesixhumanisi noma i-deeplink, ushayela isinyathelo ngokushesha. Imilayezo ifaka phakathi isithombe nenkinobho yokubizela esenzweni engaholela umsebenzisi kusikrini esithile sohlelo lokusebenza.
I-interstitial - Ama-Interstitials yimifanekiso echofoza isikrini esigcwele esebenza phakathi kwezikrini, ngemuva kwesikrini esisodwa nangaphambi kwesilandelayo.
Umlayezo wevidiyo - Abasebenzisi bathanda ividiyo, futhi imilayezo yevidiyo iyindlela enhle yokuxhumana nomyalezo 'ongokomzwelo' noma oyinkimbinkimbi owedlula inothi elijwayelekile lolwazi.
Banner - Ngokungafani ne-interstitial, amabhanela ayizithombe ezincane ezichofozekayo ezingalethwa ezindaweni ezahlukahlukene zesikrini. Ngokungeza isibhengezo esingezansi kuhlelo lwakho lokusebenza, ungaxhumana nabasebenzisi bakho ngaphandle kokuphazamisa ukusetshenziswa kwabo kohlelo lokusebenza, ngoba isibhengezo asibavimbeli ekusebenziseni uhlelo lokusebenza.
Hlela inika amandla imikhiqizo ukwenza ushintsho lokuqukethwe kuhlelo lokusebenza ukushayela ukuzibandakanya, ngokuguqula umbhalo wohlelo lokusebenza, izithombe noma izingqikithi.
Shintsha Umbhalo - Ube ne-typo noma ufuna ukuhlola i-A / B ukuhlola izinketho eziningi zombhalo? Ufuna ukushintsha imibhalo yohlelo lokusebenza kumcimbi okhethekile noma iholide? Ufuna ukushintsha imibhalo uma umsebenzisi eseqede isenzo esithile kuhlelo lokusebenza? Maka umbhalo ofuna ukumiselela esikrinini sohlelo lokusebenza, ubeke esikhundleni sombhalo omusha bese ulungele ukuhamba.
Shintsha isithombe - Shintsha izithombe zohlelo lokusebenza ukulungisa izingqinamba zohlelo lokusebenza noma ukubona ukuthi iziphi izithombe ezishayela ukuzibandakanya okungcono. Ukubhalwa ngekhodi okulula kakhulu, noma ngabe izinguquko zesithombe zenziwa kuphela kumongo othile, izithameli ezithile noma isikhathi.
Shintsha Itimu - Shintsha uhlelo lokusebenza ukuhlinzeka ngezindikimba ezithile zonyaka, njengamaholide noma ukubuyela emiyalezweni yesikole.
Ukuguqulwa ukufakwa kwenziwa ukudala inhloso yokuthenga nokuqinisekisa ukuthi kugcina ngokuthenga kwangempela. Bakha inhloso yokuthenga, ngenkathi ukubeka isikhathi kwezikhumbuzi zenqola kungaqondisa kabusha abasebenzisi ukuthi baqale kabusha ukuthenga okwashiywa.
Ikhuphoni - Ukwazisa abathengi abangaba khona kokuhlinzekwayo nokuthi kungani kufanele bathenge manje, ungabonisa ukunikezwa okusebenzayo ngekhuphoni. Ukuchofoza kuthatha abasebenzisi esikrinini sohlelo lokusebenza esifanele noma kuvule isiphequluli.
Isikhumbuzi senqola (Phusha) - Uma abasebenzisi basenezinto ezisenqoleni yabo, bathole ukuthi babuye futhi baqedele ukuthenga ngesaziso esenziwe ngezifiso ukuthi izixhumanisi ezijulile kusikrini senqola sohlelo lokusebenza.
In-app Umlayezo - Ukufakwa kwemilayezo yohlelo lokusebenza kungasetshenziswa ukukhumbuza abasebenzisi ngenqola yabo yokuthenga elahliwe ngesikhathi esizayo lapho beqalisa uhlelo lokusebenza.
Ikhasi lokufika - dala kalula amakhasi okufika enziwe ngaphakathi kohlelo lwabo lokusebenza, aqinisekise ukuthi amakhasimende afika kusuka kuzaziso ezenziwe ngezifiso, izikhangiso, imithombo yezokuxhumana noma ama-imeyili kumakhasi wokufika enziwe ngomuntu enzelwe ukuguqulwa okuphezulu.
I-interstitial - Ama-Interstitials yimifanekiso echofoza isikrini esigcwele esebenza phakathi kwezikrini, ngemuva kwesikrini esisodwa nangaphambi kwesilandelayo. Baqondisa abasebenzisi esikrinini sohlelo lokusebenza noma ekhasini lewebhu futhi bajwayele ukusetshenziselwa ukudlulisa imininingwane ezwela ngesikhathi njengokuthengiswa kwanamuhla, ukukhushulwa njll.
Zibandakanye - Ukufakwa kwethagethi nokuqala, ngisho nokugeleza komsebenzi okuyinkimbinkimbi.
Phinda usebenzise abasebenzisi abalala - Phinda usebenzise abasebenzisi abalala ngokusebenzisa okunikezwayo okukhethekile kwesikhathi esilinganiselwe, imiyalezo ebhekiswe nokuningi. Chaza futhi uhlukanise abasebenzisi abalele futhi uqondise ukunikezwa okuhlukile kwesegimenti ngayinye.
Siyakwamukela Abasebenzisi Abalahlekile - Chaza ukuthi obani abasebenzisi bakho bamandla, ngokususelwa emaphethini abo wokusebenzisa nokuningi, futhi ubonise ukubonga kwakho ngezipesheli, izaphulelo, ukufinyeleleka noma ukukhushulwa.
Ukuthuthukiswa kwenguqulo - Dala umlayezo ongaphakathi nohlelo owazisa abasebenzisi ngokutholakala kwenguqulo yohlelo lokusebenza olusha, oxhumanisa nayo.
Zuza - Ukufakwa kokutholwa kukhulisa isisekelo somsebenzisi wohlelo ngokusebenzisa izilinganiso ezingcono zohlelo lokusebenza noma ukukhuthazwa kohlelo lokusebenza. Lesi sigaba sidinga ukuthi umnikazi wohlelo lokusebenza azame isikhathi esifanele, ukuze abasebenzisi bathole ukufakwa kokutholwa okungezukugwema ukusebenzisa kwabo uhlelo lokusebenza.
Ukufakwa Kokutholwa Kwesampula - Sebenzisa lokhu kufakwa ukwazisa abasebenzisi ukuthi babelane ngohlelo lokusebenza noma ngokuqukethwe kwalo ezinkundleni zokuxhumana.
Ukuphakanyiswa kwesiphambano - Phromotha ezinye izinhlelo zokusebenza, ngokuziphakamisa kubasebenzisi bohlelo lokusebenza.
Linganisela uhlelo lokusebenza - Buza abasebenzisi isilinganiso sohlelo lokusebenza ngesikhathi esifanele - lapho babe nokuhlangenwe nakho okuhle kweselula - futhi ngaphandle kokubaphazamisa. Sincoma ukuthi ukhethe abasebenzisi bamandla bohlelo lwakho lokusebenza, ngoba kungenzeka ukuthi banikeze isilinganiso esiphezulu.
Qonda - Ukuthola izimpendulo ezifanele emibuzweni mayelana nokuncamelayo komsebenzisi, izici noma impendulo kuyinto ebalulekile yokubandakanyeka kohlelo lokusebenza lweselula. Lesi sigaba sifaka inhlolovo, analytics nokusekela ukufakwa.
Isampula Qonda Ukufakwa - Xhuma nabasebenzisi bakho ukuthola impendulo yesikhathi sangempela kuzici ezintsha zohlelo lokusebenza, inani lohlelo lokusebenza, okuthandwa nguwe, nanoma yisiphi esinye isihloko, usebenzisa inhlolovo yombuzo owodwa.
Inhlolovo yombuzo eminingi - Ucwaningo olunemibuzo eminingi lungethulwa kusikrini esisodwa noma ngesilayida.
Thekelisa ku-google analytics - Lokhu kufaka kukuvumela ukumaka umcimbi ongathanda ukuwulandela esikrinini, usebenzisa i-interface yethu yewebhu, futhi ube nakho analytics mayelana nalowo mcimbi othunyelwe ngesikhathi sangempela ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Qamba inika amandla imikhiqizo ukudala ukufakwa kwangokwezifiso kusetshenziswa noma yikuphi okuqukethwe kwe-HTML, ukukhombisa noma yikuphi kuhlelo lwakho lokusebenza, ngamakhono afanayo okuqala ukufaka ngaphakathi kokuqukethwe kohlelo lokusebenza, isikhombimsebenzisi somsebenzisi kanye nokukhomba izithameli ezithile.
Tags: ngaphakathi nohleloukumaketha okungaphakathi nohleloimiyalezo engaphakathi nohleloimiyalezo engaphakathi nohleloukufakaphakathiuhlelo lokusebenza lweselulaizibalo zohlelo lokusebenza lweselulaamakhuphoni wohlelo lokusebenza lweselulaimpendulo yohlelo lokusebenza lweselulaukugqanyiswa kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselulaukumaketha kohlelo lokusebenza lweselulaUkusebenza kohlelo lokusebenza lweselulaukushicilela uhlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula lucindezela imiyalezouhlelo lokusebenza lweselula liphakamisa impenduloinhlolovo yohlelo lokusebenza lweselulaukuhlolwa kohlelo lokusebenza lweselulaithiphu yamathuluzi wohlelo lokusebenza lweselulaumlayezo wokuthuthukisa uhlelo lokusebenza lweselulaukuhamba kohlelo lokusebenza lweselulauhlelo lokusebenza lweselula lwemukela imiyalezoIzinhlelo zokusebenza zeselulaamakhuphoni eselulaindawo yeselulaimilayezo yevidiyo ephathekayoinhlolovo yezinhlelo zokusebenza zeselulaipulatifomu yocwaningo yezinhlelo zokusebenza zeselula
IMcommerce Manje Isikhula ngama-200% Ngokushesha kune-Ecommerce
I-DeviceRank: Izindleko Zokufakwa kohlelo lokusebenza lweselula nokukhwabanisa kokuzibandakanya